WOWOW किचन नल कमर्शियल स्प्रेयर - सर्वश्रेष्ठ किचन नल 2021 | सर्वश्रेष्ठ बाथरूम नल | WOWOW नल
घर / भान्साको नल / भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् / WOWOW किचन नल वाणिज्यिक स्प्रेयर
ब्रश निकल तल किचनको नल, पूर्ण स्टेनलेस स्टील, गाढा र विस्फोट प्रूफ, पर्याप्त विश्वसनीय गुणवत्ता तल तान्नुहोस्
भान्साको नल वसन्त स्प्रेयर २ pull१२००० तान्नुहोस्
स्प्रि down पुल डाउन स्प्रेयर किन्च faucets मूलतया रेस्टुरेन्टहरूमा औद्योगिक प्रयोगको लागि बनाइएको थियो। जस्तो कि तपाईं छवि लिन सक्नुहुन्छ, रेष्टुरेन्टहरूमा प्रदर्शन र टिकाउ अत्यधिक मागको छ र स्प्रि pull पुल डाउन स्प्रेयर किचन फ्याक जस्तो सबै किचन उपकरणहरूले अधिकतम प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। कर्मचारीहरूले यी औद्योगिक भान्साका नलहरू द्रुत रूपमा र कुनै पनि सफाया बिना प्रयोग गर्दैछन्। स्प्रि kitchenर किचन नलको वसन्त पुल डाउन सम्भावित अवरोध लगभग विनाशकारी हुनेछ। फलस्वरूप, औद्योगिक भान्साको नल उच्चतम उद्योग मापदण्डको साथ बनाईएको छ, र अझ बढी टिकाऊ सामग्रीहरूको साथ। WOWOW मा हामी सामान्यतया माथिको उद्योग मापदण्डहरू प्रयोग गर्दछौं, र हामीले यस अद्भुत औद्योगिक भान्साको नल स्प्रि pull स्पुलर डाउन स्प्रेयरको साथ टिकाउमा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।
धेरै व्यक्तिहरूले यस घरको भान्साको नल स्प्रि pull स्थापित गर्दछ। तपाईंको भान्साको डिजाईनमा निर्भर गर्दै, एक औद्योगिक लुकले तपाईंको भान्साको लागि राम्रोसँग कार्य गर्दछ। कम से कम तपाईलाई थाहा छ कि यस औद्योगिक भान्साको नलको टिकाउ उच्च-अन्त हो, प्रदर्शन शीर्ष खाल हो र यसको डिजाईनले तपाईको भान्छामा कच्चा, औद्योगिक स्पर्श दिन्छ। चूंकि भान्साका नलहरू सामान्यतया कुचिनको प्राकृतिक केन्द्र बिन्दु हुन्, यस प्रभावकारी किचन नल स्प्रि withले स्प्रेयर डाउन पुलको साथ तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो भान्साकोठामा सबै ध्यान समात्नुहुनेछ। यसको अग्लो, पातलो र न्यूनतम डिजाइनको कारणले, यो भान्साको नल विशेष रूपले आधुनिक भान्सा डिजाइनहरूका लागि उपयुक्त छ। तसर्थ, यस भान्छाको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर कुनै पनि आधुनिक रसोई डिजाइनको लागि निश्चित रूपमा ठूलो अपग्रेड हुनेछ।
औद्योगिक वसन्त स्प्रेयर किचन नल तल तान
भान्साकोठा यो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो घरमा पकाउनुहुन्छ। धेरैको लागि खाना पकाउने भाग चुनौती होइन, तर सफा गर्ने भाग हो। तपाईंले खाना पकाएर र खाना खाइसक्नुभएपछि, भान्साकोठा सफा गर्नु प्रायः आभारी कार्य हुँदैन। यदि तपाईंले उही दिन अघि भान्साकोठा सफा गर्नुभयो भने पनि, हरेक भोजन पछि तपाईंले फेरि बारम्बार सुरू गर्नुपर्नेछ। के तपाईंलाई खाना पकाउने जत्तिकै रमाइलो गर्न मनपर्दैन र? ठीक छ, हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं कि सफाई सबैभन्दा रमाईलो काम त्यहाँ हुनेछ, तर कम्तिमा हामी यसलाई हाम्रो भान्साको नल स्प्रि pull पुल डाउन स्प्रेयरको साथ अझ रमाइलो बनाउन सक्छौं। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामी यसलाई हाम्रो औद्योगिक भान्साको नलद्वारा सफा गर्न धेरै सजिलो बनाउन सक्छौं।
WOWOW को भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर एक बहुफंक्शनल संरचना छ। उच्च-प्रेशर स्प्रे हेडले सजीलै भाँडो र भाँडाहरूबाट सबै फोहोर हटाउँछ। यस बाहेक, यो औद्योगिक भान्साको नलले दुई प्रकारका स्ट्रिमहरू प्रदान गर्दछ। पुल डाउन स्प्रेयरले तपाईंलाई उच्च दबावको स्प्रे प्रदान गर्दछ, र उच्च चापको भान्छाको नलले एक नियमित स्ट्रिम राख्दछ। यसको retractable र लचिलो पानी नली र पुल-डाउन स्प्रे टाउकोको साथ, नली तपाईंको पहुँच एकदम विस्तार गर्न विस्तार गर्न सकिन्छ। र चुम्बकीय डकि arm हातले स्प्रे टाउको दृढतापूर्वक समात्दछ, ताकि यो वरिपरि झुम्किन नहोस्।
किचनको नल स्प्रि industrialले औद्योगिक प्रयोगको लागि स्प्रेयर तान्नुहोस्
यसको प्रदर्शनको अलावा, यस भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर अन्तिम स्थायित्वको लागि बनाईएको थियो। सबै भन्दा पहिले, सबै सामग्री नेतृत्व-मुक्त र जंग प्रतिरोधी हो। यसका साथै पानीको तापक्रम नियन्त्रण गर्न भल्भ विशाल धातुले बनेको छ। तपाईले फरक पाउँदा तत्कालै महसुस गर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई सम्हाल्दा। साथै स्प्रे ह्याण्डल व्यावसायिक प्रयोगको लागि बनाइएको छ। भिन्न प्रभावकारी हुन्छ जब तपाईं यसलाई नियमित घर-भान्साको नलसँग तुलना गर्नुहुन्छ। औद्योगिक भान्साको नललाई व्यावहारिक रूपमा यी प्रकार्यहरू 'लुकाउन' को लागि अभिन्न डिजाइन कार्यहरू आवश्यक पर्दैन, यस भान्साको नल वसन्तमा स्प्रेयर पुल डाउन स्प्रेयरमा ह्यान्डल प्रमुख रूपमा उपस्थित छ। यसैले कुनै पनि सम्झौता मलाई यस भान्छाको नल ह्यान्डलको प्रदर्शन र टिकाउपनतर्फ बनाएको थिएन।
ब्रश निकल किचन नल स्प्रि down स्प्रेयर डाउन पुल
स्थायित्व र प्रदर्शनको साथसाथै, शैली पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाईं औद्योगिक किचन नल चयन गर्नुहुन्छ। तपाईं एक कच्चा डिजाइन चाहनुहुन्छ, र अझैसम्म भान्छाको नल एकै समयमा स्टाइलिश हुनु पर्छ। यो औद्योगिक भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर तपाईं कच्चा औद्योगिक र सुरुचिपूर्ण, स्टाइलिश डिजाइन को एक प्रभावशाली विरोधाभासपूर्ण संयोजन प्रदान गर्दछ। ठूलो घुमाउरो तपाईंको भान्छाको नल एक प्रभावशाली औद्योगिक लुक प्रदान गर्दछ, र अझै तपाईले यस भान्साको नलको बारेमा हेर्नुभयो भने, तपाईं भान्साको नल आधारको एक परिष्कृत डिजाइन देख्नुहुनेछ। यस संयोजनले यस शैलीलाई विशिष्ट र अनुपम बनाउँदछ। सरल, एकै समयमा रमणीय र प्रभावशाली।
भान्साको नल स्प्रि pull पुल डाउन स्प्रेयरको ब्रश निकल कोटिंगले तपाईंको भान्साको लागि चाहिने स्टाइलिश फिनिशिंग प्रदान गर्दछ। यस फिनिशले तुरुन्तै कुनै पनि भान्साकोठामा अधिक सुरुचिपूर्ण लुक प्रदान गर्दछ, जुन प्रकारको किन्चको नल तपाईंले चयन गर्नुभयो। र यसका अतिरिक्त व्यावहारिक लाभबाट तपाईले लाभ उठाउनुहुनेछ कि तपाईले यस भान्छाको नलमा कुनै फोहोर औंला प्रिन्ट देख्नुहुने छैन। यसलाई सफा गर्न धेरै सजीलो हुन्छ यसलाई ब्रान्ड नयाँ राज्यमा जहिले पनि राख्नुहोस्।
किचनको नल वसन्त स्थापना गर्दै स्प्रेयर डाउन
WOWOW को भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ। गलत ट्र्याकमा नराख्नुहोस् किनभने यो औद्योगिक भान्साको नलको प्रभावशाली आकारको कारण। तपाईं सजिलैसँग यो औद्योगिक किचनको नल स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ कुनै महँगो पेशेवरको मद्दत बिना। भान्साको नल स्प्रि pull पुल डाउन स्प्रेयर तपाईलाई यस औद्योगिक भान्साको नल स्थापना गर्न आवश्यक सबै चीजसहित आउँछ, जस्तै डेक माउन्ट, धातु पानी हुज, र एक स्पष्ट किस्त गाइड। व्यावहारिक पञ्जीहरू पनि तपाइँलाई एक सजिलो र आरामदायक किस्तको अनुभव प्रदान गर्न समावेश गरिएको छ।
संक्षेपमा, यो भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयरले तपाईंलाई पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गर्दछ, यसको औद्योगिक गुणवत्ता र अझै उचित मूल्यको कारण। यो स्थापना गर्न सजिलो छ, र पक्कै पनि यो तपाईंको आधुनिक भान्छाको डिजाईनमा बहुमूल्य थप हुनेछ। यस भान्साको नल वसन्त पुल डाउन स्प्रेयर-बर्षे वारंटी र5० दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ आउँदछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, WOWOW मा हामी हाम्रो भान्छाको नल स्प्रि pull पुल डाउन स्प्रेयरमा विश्वास गर्छौं र हामी विश्वस्त छौं कि तपाईले पाउनुहुने पैसाको मूल्यले तपाई प्रभावित हुनुहुनेछ। हामी तपाईंलाई प्रभावित गरौं!
भान्साको नल वसन्त को फाइदा संक्षेप मा स्प्रेयर तल पुलll:
। उच्च प्रदर्शन औद्योगिक रसोई नल
Ret फिर्ता योग्य पानी नलीको साथ व्यापक पहुँच
। चरम टिकाऊपन
Leg सुरुचिपूर्ण र स्टाइलिश विवरण
Net चुम्बकीय डकिंग आर्म
SKU: १2312000००।। विभाग: भान्साको नल, भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् टैग: ब्रश निकल, भान्सा सिink्क नल, एकल ह्यान्डल पुल
30.8 x 12.6 x3इन्च
बैटरियों को आवश्यकता छ?